Kubatana Kunotangisa Iyo Inodzivisa Shongwe Dambudziko uye Kubatana Nhandare | Linux Vakapindwa muropa
Kubatana Technologies, musiki wepasirese anoshandiswa zvakanyanya epasirose-nguva 3D yekuvandudza chikuva, achangobva kuzivisa kuvhurwa kuri pedyo kwe Kutanga Chipingamupinyi Tower Dambudziko mukubatana neGoogle Cloud chikwiriro, mutsigiri mukuru.
Ichi chiitiko chakasarudzika cheArtificial Intelligence (AI) chakagadzirirwa kuyedza kugona kwevamiriri vane hungwaru uye kumhanyisa kutsvagisa nekusimudzira munzvimbo yeAI uye Machine Kudzidza (ML).
1 Iyo Dziviriro Shongwe Chidenha chinetso pakati peAI
1.1 Nezve iyo Unity Playground chirongwa
1.2 Iyo chirongwa chevechidiki vanofarira
Iyo Dziviriro Shongwe Chidenha chinetso pakati peAI
"Iyo Dziviriro Shongwe Dambudziko" yakanga yakagadzirirwa kutenderedza nharaunda inogadzirisa iyo Unity ML-Agents toolkit yekusundira iyo miganho yehukama-wemuchina hukama uye ongorora mashandiro emachine munzvimbo dzakasiyana.
Kunyanya, inofanirwa kushanda sereferenzi yekuyedza mhinduro, generalization, kuronga kwepamusoro-soro, kuona, uye kugona kugona kwemaitiro eAI.
Uku kupokana kuri pamusoro pechangobva kuburitswa nharaunda yemitambo ine mazana zana ane dambudziko rinoshanduka munguva chaiyo.
Inobatanidza chikuva-senge mutambo wemitambo nemapuzzle uye kugadziridza kwepuzzle mukati meshongwe ine nhanho dzinogona kusingaperi, uku uchisanganisira vavengi nemisungo.
Iyo AI iyo icharwa muOstacle Tower ichafanirwa kugara ichichinjika kuti ipedze nhanho.
Sezvo mutambo uchipa wechitatu-munhu ruzivo, iyo AI iyo inokwanisa kuikunda iyo inofanirwa kuve nekuziva kwakanaka kwekumiririrwa kwayo kwenzvimbo munzvimbo yemutambo.
Danny Lange, Mutevedzeri weMutungamiriri weAI neML kuUniity Technologies, akati: "Imwe neimwe yepasi peshongwe inogadzirwa nenzira, izvo zvinoreva kuti mumiriri weAI haafanire kungokwanisa kugadzirisa vhezheni imwe chete yeshare, asiwo chero vhezheni inopesana."
Vati Kubatana kwaida "kupa vaongorori chimwe chinhu chavanogona kunyatso shanda nacho, izvo zvinozomanikidza kugona kwehurongwa hwekuchenjera hwekugadzira huri kuitika pasi rese."
Vatori vechikamu mu dambudziko iri richava nemukana wekuhwina mibairo mizhinji.
Uyo anokunda achapihwa $ 10,000 mumari, inosvika kumadhora mazana maviri nemazana mashanu ekuenda kumusangano weIA / ML, uye makoponi anokwanisa kudzikinurwa papuratifomu yeGoogle Cloud.
Yese kukosha kwemari kana mu-mutsa-mibairo yekupihwa muiyi dambudziko yakakura kudarika $ 100,000.
Unity Obstacle Tower Dambudziko rinotarisirwa kutanga zviri pamutemo muna Kukadzi 11, 2019, nematanho ekutanga makumi maviri nemashanu anowanikwa munaKurume 25, 31.
Matanho ese haafanire kuwanikwa kusvika Kubvumbi 15, 2019. Mvumo yekutambira Vanokunda vachaziviswa muna Chikumi 14.
Nezve iyo Unity Playground chirongwa
Kune rimwe divi, Kubatana kunoziva kuti rimwe rematambudziko akakura mukugadzira mutambo wevhidhiyo kunzwisisa chirongwa.
Kunyangwe mumainjini emitambo senge Kubatana, iko kudiwa kwekunyora mitsara yekodhi kunonzwika nekukurumidza kunyangwe iyo injini ichipa imwe senge modhi mu Unreal Injini.
Ndokusaka vanhu vekubatana vafunga kuvhura Unity Playground rinova chirongwa chitsva, chinowanikwa mu Kubatana zviwanikwa chitoro che gonesa kugadzirwa kwemutambo wevhidhiyo nekufambisa nzira kune pfungwa iyo inowanzoitwa kuburikidza nekodhi.
Iyo chirongwa chevechidiki vanofarira
Naizvozvo, Nokubatana Nhandare, vana nevadzidzisi vanogona kutora chikamu mukugadzira mutambo, kungave kwekudzidzisa zvinangwa kana sekutandarira.
Iyo projekiti inosanganisira seti yezvinhu iyo inogona kushandiswa sezvivakwa zvekuvaka kuita chero mutambo.
Izvi zvinhu zvinorerutswa kusvika pakakwirira kuitira kuti zvisapfuure mushandisi. Uye zvakare, mitambo mitanhatu inosanganisirwa kushanda semuenzaniso:
mutambo wenhabvu wevatambi vaviri
dombo reLunar Lander
roguelike iyo inosanganisira yakapusa yekugadzira uye yekuisa system
Unonakidza uye mutambo wekuunganidza.
Iyo projekiti inogona zvakare kuwanikwa pa GitHub (pasi peMIT rezinesi) uye zvinokwanisika kupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubatana kunovhura Chipingamupinyi Shongwe Dambudziko uye Kubatana Nhandare